फेरि लकडाउन ? सरकार भन्छ– ‘के गर्ने तपाईंकै हातमा छ’ – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/फेरि लकडाउन ? सरकार भन्छ– ‘के गर्ने तपाईंकै हातमा छ’
सबैले मास्क लगाए लकडाउन हुँदैन : सीसीएमसी प्रवक्ता कोरोना भाइरस रो,क,था,म तथा नियन्त्रणका लागि गठित कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) का प्रवक्ता महेन्द्र गुरागाईं फेरि लकडाउन हुने हल्ला चले पनि लकडाउन गर्ने सम्भावना नभएको बताउँछन् । उनले लकडाउन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा नागरिको हातमा रहेको बताउँछन् । उनले मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाउने हो भने सङ्क्रमणको दर कम हुने र लकडाउन नहुने बताए । यसका लागि सबै पक्ष ,स,चे,त हुनुपर्ने प्रवक्ता गुरागाईंले रातोपाटीलाई बताए ।